कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २९ गते सुक्रबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज चैत्र २९ गते सुक्रबारको राशिफल !
प्रकाशित : बिहिबार, चैत २८, २०७५१७:४३ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
आज तपाइँको दिन मिश्र फलदायी रहनेछ । नयाँ कार्य गर्ने प्रेरणा मिल्नुका साथै नयाँ कार्य गर्न पनि सकिन्छ । मनमा शिघ्र परिवर्तन आउनेछ । यस कारण मन द्विविधा युक्त रहनेछ । नोकरी एवम् व्यवसायमा तपाइँको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारको सामना गर्नु पर्नेछ । छोटो प्रवासको योग छ । महिलाले वाणीमा संयम राख्नु होला ।
हातमा आएको अवसर अनिर्णायकताको कारण गुम्नेछ र त्यसको लाभ लिन सक्नु हुनेछैन । विचारमा हराई रहँदा निश्चित निर्णय लिन सक्नु हुने छैन । नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्नु हितकारी हुने छैन । वादविवाद या चर्चामा तपाइँको जिद्दी स्वभाव कारण संघर्षको सम्भावना रहेको छ । भाइ-बहिनिमा प्रेम रही रहनेछ ।
आजको दिनको शुरुवात प्रफुल्लित मन र स्वस्थ चित्तबाट हुनेछ । मित्र या परिवारका सदस्यको साथ भोजनको आनन्द उठाउन सकिनेछ । सुन्दर वस्त्र धारण गर्न पाउनु हुनेछ । आर्थिक दृष्टिबाट लाभदायक दिन रहेको छ । अधिक खर्चमा संयम राख्नु होला । मनबाट सबै नकारात्मक विचारलाई निकालिदिनु होला । कोहि प्रियजन या मित्रबाट उपहार पाउँदा मन प्रफुल्लित रहनेछ ।
आज मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ । कुनै एक निश्चयमा नपुग्दा र धर्मसंकटको कारण मानसिक कष्ट हुनेछ । सम्बन्धिको साथ मनमुटाव हुनेछ । पारिवारिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । झगडा, मारामारीबाट टाढा रहनु होला । समस्याको तत्काल निवारण हुनेछ । अकास्मातबाट सम्हालिएर हिड्नु होला । स्वास्थ्य एवम् धन हानीको संभावना रहेको छ ।
आजको दिन तपाइँको लागी राम्रो रहनेछ । तर पनि द्विविधापूर्ण मानसिकताको कारण आएको अवसर गुम्नेछ । तपाइँको मन विचारमा हराई रहनेछ । आज कुनै नयाँ कार्यको आरम्भ नगर्दा नै राम्रो हुनेछ । स्त्री मित्रको साथ भेट हुनेछ । साथै स्त्री मित्रबाट लाभ मिल्नेछ । मित्रको साथ प्रवास पर्यटनको आयोजना हुनेछ । यो लाभ दायक पनि रहनेछ । व्यापारमा लाभ हुनेछ । धन प्राप्तिको योग छ ।
आजको दिन शुभ फलदायी रहनेछ । नयाँ कार्यको आयोजना सफल हुनेछ । व्यापारी तथा नोकरी पेशा गर्नेको लागी लाभ परद दिन रहेको छ । उनीहरुको पदोन्नतिको संभावना छ । शिर्ष अधिकारबाट लाभ हुनेछ । धन, मान-सम्मान मिल्नेछ । पिताको तर्फबाट लाभ हुनेछ । परिवारमा आनन्दको वातावरण छाउनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । सरकारी कार्य सम्पन्न हुनेछ । सरकारबाट लाभ हुनेछ ।
वौद्धिक तथा लेखन कार्यमा सक्रिय रहनु हुनेछ । नयाँ कार्यको प्रारम्भको लागी राम्रो दिन छ । लामो प्रवास या धार्मिक स्थलमा पर्यटनको प्रसङ्ग उत्पन्न हुनेछ । व्यवसाय या नोकरीमा सहकर्मीको तर्फबाट सहकार्य मिल्नेछ । सन्तानको विषयमा द्विविधा रहनेछ । विरोधीको साथ गहन चर्चामा नपर्नु होला ।
नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नु होला । क्रोधमा संयम राख्नु होला । अनैतिक कामवृत्तिबाट टाढा रहनु होला । राजकीय अपराध सम्बन्धित र सरकारी प्रवृतिबाट टाढा रहनु होला । नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्नु अघि गम्भीरतापूर्ण विचार गर्नु होला । इश्वरको आराधनाबाट लाभ हुनेछ ।
आजको दिन सुख पूर्वक तथा आनन्दमा व्यतित हुनेछ । मनोरंजनको दुनियाँमा रहनु हुनेछ । पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन तथा वस्त्रपरिधान आजको दिनको विशेषता रहनेछ । विपरीत लिंगीय व्यक्तिसंगको भेट रोमान्चक रहनेछ । विचार परिवर्तन शिघ्र हुनेछ । भागीदारीबाट लाभ हुनेछ । सम्मान र ख्याती मिल्नेछ । उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हुनेछ ।
व्यापारमा विस्तार हुनेछ । धनको लेन देनमा सरलता रहनेछ । घरमा शान्ती र आनन्दको वातावरण रहनेछ । आवश्यक कारणले धन खर्च हुनेछ । नोकरीमा सहकर्मीको तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । शत्रु माथि विजय प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ ।
आज कुनै पनि नयाँ कार्य प्रारम्भ नगर्नु होला । विचारमा शिघ्र परिवर्तन आउनेछ । महिलाले आफ्नो वाणीमा संयम राख्नु हितकार हुनेछ । यात्रालाई सम्भवत स्थगित गर्नु होला । सन्तानको प्रश्नको कारण चिन्ता रहनेछ । आकस्मिक खर्चको योग छ ।
अरुचिकर घटनाको दिन उत्साहजनक रहने छैन । परिवारजनको साथ वादविवाद हुनेछ । मतको स्वास्थ्य बिग्रन सक्दछ । मन प्रफुल्लित रहने छैन । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रदा अनिन्द्राले सताउनेछ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असोज ६ गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेष्ठ २५ गते शनिबारको राशिफल !
कस्तो रहला तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार ९ गते सोमबारको राशिफल !